Sarotra ve ny mahazo vola amin'ny Marketing Affiliate? - Learn Expert Blogging
Post category:Marketing amin'ny Affiliate / Earn Money Online
Ny marketing Affiliate dia momba ny marketing vokatra iray. Raisinao alohan'ny mpanatrika ny vokatra, hazavao ny fiasa- manao ahoana ny tombony azon'izy ireo amin'izany vokatra izany? raha tian'izy ireo izany, mividy izy ireo ary miverina amin'ny varotra, mahazo komisiona ianao. Ity dia hevitra tsotra momba ny marketing marketing.
Tsy sarotra izany fa ny dingana mora indrindra hahazoana vola amin'ny marketing Affiliate raha mampitaha fomba hafa hahazoana vola. Afaka mahazo vola be ianao amin'ny fiezahana kely. Raha ny tena izy, tokony kendrenao ny mpihaino marina, ny olona izay mitady manokana ny vokatra dia tokony ho sahirana.
Ny mpihaino mahitsy no zava-dehibe indrindra. Ny olona sasany aza dia manivana ny mpihaino ary mikendry azy ireo taty aoriana mba hampitomboana ny tahan'ny fiovam-po. Ny fanivanana ny olona dia fotokevitra novolavolaina antsoina hoe cornel.
Zavatra sasany, tsy maintsy miraharaha ianao mba ho mora amin'ny sarotra hahazoana vola. andao hodinihintsika izy ireo.
Orinasa manolotra komisiona Affiliate
Mikendry mpividy mifandraika amin'izany
Mitadiava vola mora amin'ny fahombiazana
Maninona no lasa sarotra?
Miaraka amin'ny mpihaino mety, tsy afaka mandà ny maha-zava-dehibe ny isan-jaton'ny komisiona ianao. Tsy isalasalana, Nahita olona an-jatony maro aho izay miteraka mihoatra ny $2000 isam-bolana mora amin'ny mpiara-miasa Amazon.
na izany aza, komisiona hafa manolotra orinasa dia tsy mihoatra ny mpiara-miasa amin'i Amazon. Amazon ihany no manolotra 8 ny 10% komisiona ambony indrindra nefa, orinasa toa ny Clickbank vonona handoa 60% ny vaomiera momba ny vokatra. Noho izany, Tokony ho hendry ianao raha maka ny karazana vokatra sy ny tahan'ny komisiona.
Inona no ataon'ny vao manomboka- mamorona fotsiny ny tranonkala mpiara-miasa mamokatra atiny tsy maharesy lahatra, ao amin'ny tranonkalany ary manomboka mampiroborobo. Tsy azon'izy ireo ny lanjan'ireo mpividy marina. Izany dia manasarotra ny fahazoana vola eo amin'ny Internet.
Ny fikendrena marina no lafiny tena ilaina amin'ny fahombiazan'ny marketing marketing. Nahita tranga marobe aho rehefa nanolotra ny vokariny tamin'ireo olona tsy liana ny olona.
Ohatra -Raha misy mitady seza ary mampiroborobo ny endri-telefaona finday ianao, fandaniam-potoana tanteraka io, ANGOVO, miasa mafy ary azo antoka fa mandiso fanantenana anao ary manao ezaka mafy hahazoana vola amin'ny marketing marketing.
Tadidiko, rehefa nanomboka marketing marketing aho dia nanao bilaogy tena tsara. Niara-niasa tamin'ny famoronana atiny misy kalitao sy maharesy lahatra izahay. Nandeha nitady antsipiriany momba ny teny fanalahidy ambany fifaninanana avy amin'ny Semrush izahay, ary avy amin'ny Google mandeha amin'ny laoniny. Saika izahay 40 + lahatsoratra ho an'ny mitohy 2 volana.
Nifantoka tanteraka tamin'ny lasibatra biolojika izahay. Midika izany rehefa misy olona manoratra “solosaina finday tsara indrindra eto ambany 1000 dolara”. Tokony hitsidika ny lahatsoratry ny bilaoginay antsoina hoe “solosaina finday tsara indrindra eto ambany 1000 dolara”.
Ny tena ataontsika dia- mikendry ny mpihaino mety izahay. Midika izany fa misy olona mitady a “laptop tsara ao ambany 1000 dolara”, ary manompo azy ireo ihany isika. Eto, raha izany dia, mbola ambony ny tahan'ny fiovam-po ankehitriny.
raha misy mangataka fampahalalana momba ilay solosaina finday. Tsy mivarotra na mampiseho zavatra hafa izahay.
Maka ny fanampian'ny Facebook ny olona, Twitter, sns. handroaka ny fifamoivoizana mankany amin'ny tranonkalany avy amin'ny loharano samihafa ary hiafara amin'ny tsy fivarotana. Ny antony dia- Ny fifamoivoizana azonao avy amin'ny media sosialy, iry e, iza no mahalala olona mitady laptop manokana amin'ny olona an-tapitrisany.
Fa raha miresaka momba ny fikarohana amin'ny alàlan'ny Google isika, misy olona manokana manoratra teny fanalahidy ary mahazo ny valiny arakaraka izay ilaina indrindra. Ka izany no mahatonga ny tahan'ny fiovam-po hijanona ambony kokoa rehefa mikendry amin'ny alàlan'ny motera fikarohana noho ny an'ny media sosialy.
na izany aza, tsy afaka mandà fahafaha-manao roa ianao. Ny iray dia ny mikendry ny mpihaino marina amin'ny vondrona media sosialy. Manana safidy ianao hanatevin-daharana ireo vondrona mifandraika ary hizara azy ireo ny lahatsoratra mifandraika indrindra aminao.
Ny safidy faharoa dia ny mandeha amin'ny doka misy karama. Ny Facebook dia ahafahanao mikendry sokajin-taona manokana ary koa mpihaino liana. Hampiseho ny doka fandefasana bilaoginao amin'ireo mpampiasa liana amin'ny solosaina finday fotsiny ihany izany (ohatra). Saingy ity misy fetra iray indray, tsy fantatsika ny fotoana ividianan'izy ireo. Na nividy izy ireo na te hividy na liana amin'ny fahazoana fahalalana momba ny haitao mandeha ankehitriny fotsiny.
Fomba iray hafa ahazoana vola mora amin'ny alàlan'ny marketing marketing amin'ny alàlan'ny famoronana funnel click. Ny fantsona fantsona dia manivana ireo olona mitady ny vokatra amin'ny ankapobeny.
Ny ataon'izy ireo dia mandeha amin'ny dokambarotra karama na fifamoivoizana ara-nofo. Rehefa misy mitsidika ny tranonkalany, asehon'izy ireo ny fiasa rehetra an'io vokatra fampiroboroboana manokana io ary angatahany ny antsipiriany fototra alohan'ny handehanana. Mandritra ny fizotrany, azon'izy ireo ny mailakao, avy eo mifindra amin'ny dingana faharoa dia fahatelo. Rehefa vita ny dingana faharoa, nifindra tany amin'ny pejy fandoavam-bola farany izy ireo.
Ny zava-misy mitranga eto dia, mandamina ny olona liana izy ireo. Ataovy mazava kokoa, RAHA 100 mitsidika tranokala fotsiny ny olona mba hamakiana fotsiny ny fiasa momba ny vokatra, avy amin'ny zato, 30 hameno ny antsipiriany fototra ny olona, ampidiro ny mailak'izy ireo.
Avy amin'ny 30, ihany 5 hifindra amin'ny pejy fandoavam-bola ny olona. Mety ho fividianana eo no ho eo izy ireo na tsia. Saingy naneho fahalianana tamin'ny tompona tranonkala izy ireo. Liana amin'izany vokatra izany izy ireo saingy tsy vonona ny handoa izany fotoana izany.
Amin'ny manaraka indray, namela olona zato rehetra, olona dimy monja ny mpihaino anao havanana. Raha mahazo komisiona mendrika amin'ny vokatra manokana ianao. Azonao atao ny mampitombo an'io komisiona io amin'ny 5. Raha toa ka mihoatra ny $100 ho an'ny sira, dia afaka maka sary an-tsaina mora foana ianao mora tokoa ny mahazo vola amin'ny marketing marketing.
Marketing amin'ny Affiliate (ary ny fomba hanombohana)
Azoko atao ve ny manangana tranokala miaraka amin'ny WordPress tsy misy Domain?
Afaka mahazo vola amin'ny Internet ve ny mpianatra
Previous PostOhatrinona ny vola azonao amin'ny Blog WordPress?
Next PostOhatrinona ny vola azonao amin'ny Google AdSense?
Azonao atao ve ny manao marketing marketing miaraka amin'i AdSense?